TAARIIKHDA JURKs - Somali
Laga soo bilaabo 1974, JURK waxay caawimaad xagga sharciga ah u fidisay in ka badan konton kun oo haween ah. Khibradaha JURK ay ka hesho kaalmada sharciga ee la taaban karo waxaa loo adeegsadaa shaqada siyaasadda sharciga. Tani waxay ahaan jirtay, tahayna lafdhabarta fikirka ka dambeeya jiritaanka JURK. Aqoonta aan u leenahay xaalada dhabta ah ee haweenka xagga sharciga waa in loo gudbiyaa bulshada, sidaasna kaalmaynta sharciga waxay uga muhiimsantahay caawimada gaarka ah ee haweeneka qaarkood ay helaan. Khibradda JURK ee dhawr iyo tobanka sano waxay muujineysaa in sharciga lab iyo dheddig-laboodka ama Sharciga Sinnaanta midkoodna uusan damaanad u ahayn xoreynta haweenka, ama sinnaanta haweenka iyo ragga.
Gabdhaha ardayda ah ee Kulliyadda Sharciga ee Oslo waxay aasaaseen koox kiisaska haweenka ah sanadkii 1972. Sannadkii 1974, haween qareenno ah iyo arday ka tirsan kooxda kiisaska haweenka ee Kulliyadda Sharciga ee Oslo ayaa bilaabay abaabulka «Caawinta sharciga ee haweenka oo bilaash ah». Bilaabidu waxay ka dhalatay mashruuc cilmi baadhis ah oo shaaca ka qaaday in dumarku ay leeyihiin aqoon la’aan baahsan oo ku saabsan xaga sharciyada ee xuquuqdooda. Intaa waxaa dheer, mashruuca cilmi baadhista wuxuu muujiyay in haweenku ay ku adkaatay inay u adeegsadaan aqoonta xeerarka sharciga xaaladdooda. Sanadkii 1978 wuxuu noqday magaca ururka oo loo beddelay Talo Sharciyeedka Haweenka - JURK - maxaa yeelay magacii hore ayaa si fudud loogu wareeri karay oo ahaa Xafiiska Caawinta Sharciga ee Bilaashka ah.
Ujeedada JURK ee waqtigaas waxay ahayd la dagaalanka cabudhinta haweenka iyo hagaajinta booska sharciga ee haweenka. Ujeedada shaqada ee JURK waxaa lagu qeexay:
inay bixiso talo bixin sharci oo bilaash ah.
in la baadho baahida loo qabo kaalmada sharciga ee haweenka.
in la baadho lana hagaajiyo booska sharciga ee haweenka.
in la siiyo ardayda sharciga ah tababar ku saabsan ficil ahaan, shaqada sharciga.
Iyada oo loo marayo kooxda la talinta "Caawinta sharciga ee haweenka ee bilaashka ah", ardayda sharciga waxay la kulmeen wax badan oo aayaha haweenka ah, qareeno badan oo mustaqbalka ahna waxaa jiray wacyi gelin xeel dheer oo ku saabsan farqiga u dhexeyn kara sharciga rasmiga ah iyo kan maadiga ah, ee ku saabsan masaafada u dhexeysa xuquuda iyo helida xaqaaga.
Khibradaha ka soo baxay kiisaska la-talinta waxay saldhig u ahaayeen horumarinta xuquuqda haweenka. Waxay ahayd miraha falanqaynta dumarka ee nidaamka garsoorka ee halkaan la dhigay. Sharciga haweenka (oo loo aasaasay maaddo u gaar ah UIO 1974 oo ah tii ugu horreysay ee Yurub) iyo inta kale ee dhaqdhaqaaqa sharciga muhiimka ah ayaa shaaca ka qaaday in sharcigu ku lug leeyahay xulashooyinka qiimaha, iyo in ilaha sharciga aysan ahayn ujeeddo sida qareennada jecel inay soo bandhigaan; taas cagsigeeda, waxay leeyihiin awood ay ku sharciyeeyaan waxa jira.
Ka baxsan 70 kii wixii ka dambeeyay waxaa yimid dhowr sharci oo jinsi ah, halkaasoo ragga ay ku lumiyeen faa'iidooyin gaar ah, sida sharci cusub oo sharaf leh sanadkii 1974 oo ay la siman yihiin taxanaha sharafta gabdhaha iyo wiilasha, sharci cusub oo magac ah 1979 halkaasoo ninku xaq u leeyahay inuu siiyo xaaskiisa iyo magacyada qoysaska laga saaray. Sharciga ilmo iska soo ridid ​​iskiis ah ayaa yimid 1975 - halkan xuquuqda dumarka ee ah inay ka tashadaan jirkooda ayaa la aasaasay. Sharciga Sinnaanta Jinsiga wuxuu dhaqan galay 1978, laakiin waxaa si adag u dhaleeceeyay qareenadii hore oo tilmaamay in sharciga uu ku siiyay sinaanta warqad, laakiin wali waxaa jira sinaan la’aan aan la ficil galin.
Xuquuqda aadanaha ee aragtida haweenka kuma jirin arrimaha ugu muhiimsan sharciga haweenka horaantii 1970-naadkii. Axdiga Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Haweenka (CEDAW) waxaa la ansixiyay 1979 wuxuuna dhaqan galay 1982. Waxaa ansaxiyay 162 wadan, laakiin inbadan ayaa dib uga gurtay qodobada lafdhabdharta u ah muhiimna u ah, markaa ficil ahaan waxaa yar waajibaadka haray.
Sharcigu maanta waa mid rasmi ahaan u ah dhexdhexaad ka ah jinsiga. Ficil ahaan, hase yeeshe, waxaa muuqata in haweenku inta badan ayna helin xaqooda xaaladaha isku dhaca marka loo barbar dhigo ragga. Marka, sharciyada rasmiga ah ee jinsiga-dhexdhexaadka ah uma horseedi doono daaweyn dhab ah oo siman
Sannadkii 1975-kii, "Caawinta Sharciga ee Haweenka ee Bilaashka ah" waxay lahayd 27 shaqaale waxayna ka shaqeeyeen 265 kiis. Sanadkii 2000, JURK waxay laheyd 14 shaqaale firfircoon waxayna si fiican u shaqeeyeen in ka badan 3,000 kiis. 2018, JURK waxay laheyd 24 shaqaale firfircoon waxayna si fiican uga shaqeeyeen in ka badan 6,000 oo kiis. Waxaa si isdaba joog ah u kordhaya tirada dalabka, awoodduna kuma filna in qof walba la caawiyo.
Somali > Ku saabsan